Askar American Ah Oo Lagu Dilay Dalka Urdun. – Bogga Calamada.com
Askar American Ah Oo Lagu Dilay Dalka Urdun.
Wararka ka imaanaya dalka Urdun waxay sheegayaan inay dhinteen Seddax Askari oo Mareykan ah, kadib markii lagu toogtay meel ku dhow Saldhigga Meliteri ee lagu magacaabo Amiir Al-Feysal, kaas oo kuyaalla Mandiqadda Al-Jafar ee Koonfurta dalkaasi.
Wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa xaqiijisay dhimashada Seddaxda Askari, iyadoona sheegtay in Askartaasi ay howlo tababar ah u joogeen Wadanka Urdun, waxayna sidoo kale tilmaantay inay dhinteen markii rasaas la huwiyay gaari ay saarnaayeen, xilli ay doonayeen inay gudaha u galaan Saldhigga.
Pentagonka Mareykanku waxa uu hoosta ka xariiqay inay si dhow ula shaqeynayeen Xukuumadda Urdun, si loo ogaado sababta ka dambeysa weerarka toogashada ah, waxaana qoraal kasoo baxay Wasaaradda lagu sheegay inay soo gubin doonaan tafaasiil dheeraad ah oo dhacdadaas ku saabsan.
Ilo wareed Meliteri oo ku dhow Xukuumadda daba dhilifka ee Urdun ayaa goor sii horreysay sheegay in shilka dhimashada sababay uu yimid markii Askarta Mareykanka ah oo gaari saarnaa, islamarkaana doonayay inay gudaha u galaan Saldhigga Meliteri ee Al-Amiir Feysal ay ka dhaga adeegeen inay u hoggaansamaan amar lagu siiyay inay gaariga joojiyaan, taas oo keentay in ilaaladii Saldhigga ay rasaas oodda uga qaadaan.
Xerada ay toogashada ka dhacday oo ku taalla Mandiqadda Al-Jafar ee gobolka Al-Mufriq ee Koonfurta dalka Urdun waxaa ku jira boqollaal Ciidamo ah oo kasoo jeeda dhowr dowladood oo Carab ah, waxaana halkaasi tababaro ku aadan la dagaalanka waxa loogu yeero Argagixisada ku siiya Saraakiil Mareykan ah.
Shilkani ma ah kii ugu horreeyay ee lagu dilo tababarayaal Mareykan ah oo Saldhiggaasi ka howl-gala, iyadoo bishii November ee Sannadkii hore uu isla Xeradaasi ka dhacay Weerar toogasho ah oo lagu dilay laba Askari oo Mareykan ah, waxaana toogashadaasi fuliyay Askari u dhashay dalka Urdun.